Apple CEO Tim Cook dia mamokatra $ 198 tapitrisa amin'ny 2016, Moa ve Marina NY
Apple CEO Tim Cook dia mamokatra $ 198 tapitrisa amin'ny 2016, Marina ve izany?
Ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Apple dia nahita ny karaman'ny mpampiasa azy ireo herintaona lasa izay raha toa ka nanana ny karama lehibe indrindra navoakan'ny Chief Executive Officer Tim Cook avy amin'ny fanomezam-boninahitra 2011 azy.
Ny lefitra dimy an'ny Cook dia nahazo $ US22.8 tapitrisa ($ 31 tapitrisa) tsirairay ho an'ny 2016, araka ny tondroin'ny fanambarana mpanelanelana voarakitra zoma. Ny volan'ny fanonerana dia nahitana $ US2.8 tapitrisa amin'ny karama sy vola, ary $ US20 tapitrisa amin'ny sandam-bola.
Ny Berkshire Hathaway, Warren Buffett dia nanambara fa nametraka vola maherin'ny iray tapitrisa dolara tao Apple.
Cook's $ US8.75 tapitrisa ($ 12 tapitrisa) ny fandoavam-bola tsy voavaha vola amin'ny 2016 ara-bola, anisan'izany ny vola US3 an-tapitrisa ary ny vola US5.37 tapitrisa vola, dia tsy maneho ny ampahany 1.26 tapitrisa nampitaina avy amin'ny voninahitra lehibe azony tamin'ny fiodinan'i CEO Apple .
Izy ireo dia mendrika ny $ US136 tapitrisa ($ 186 tapitrisa) raha nividy azy ireo - ny fitaterana lehibe indrindra dia nahazo ny fahatsiarovana an'i Cook tamin'ny taona lasa. Ny fanombanana ny ampahany dia tsy tafiditra ao amin'ny latabatra fandoavam-bola ataon'ny mpanelanelana satria izy io dia mirakitra sora-bola vaovao.
Ny tombontsoa dia fanoherana goavambe avy amin'i 2015 raha nahazo $ US10 tapitrisa dolara ny tale CEO ho fanonerana sy valisoa, ary $ US64.2 tapitrisa avy amin'ny fanomezana fandresena 2011. Ny ankamaroan'ny ampahany amin'ny fizarana ho an'ny 2016 ara-bola dia tsy nanamafy ny hamonoana azy ary tsy nahitana tranganà fandosirana toy izany raha nitatitra i Apple fa ny fihenan'ny vokatra voalohany isan-taona hatramin'ny 2001.
Ny endrika faratampon'ny iPhone, ny mpamokatra vola midadasika indrindra amin'ny Apple, dia tsy namelona ny fandaharam-potoana nanapahana ny lalana alohan'ny modely. Ny mpanohitra ao Shina dia mamokatra fitaovana lafo vidy raha namorona firenena ny tontolon'ny tetikasa.
Ny komity dia nanaiky ny Cook 1 tapitrisa ampifandraisina mipetraka amin'ny vest roa fanampiny tao anatin'ny 10 taona rehefa nihevitra ny fifehezana ny fikambanana Californie ao 2011.
Ao amin'ny 2013, ny valin'ny fandoavam-bola dia namatotra ny 33% amin'ny ampahany amin'ny famonoana ny famatsiam-bola amin'ny famatsiam-bola amin'ny S & P 500 ao amin'ny fangatahan'i Cook manokana manokana, ary nanomana ny vola hividianana isan-taona. Taorian'ny herintaona, namorona tahirim-bola 7-for-1 ny fikambanana.
Ny Apple CEO Tim Cook dia nanakaiky ny $ 200 tapitrisa taona lasa izay na dia nitatitra aza ny mpamokatra ny iPhone ny tatitra voalohany nataony isan-taona ...
Ny CEPE-n'i Tim Cook dia nanakaiky ny $ 200 tapitrisa taona lasa izay na dia nilaza aza ny mpamorona ny iPhone ny tatitra voalohany isan-taona momba ny famotehana hatramin'ny 2001. Saripika: David Paul Morris
Cook dia nahazo ny iray amin'ireo 280,000 famandrihana angona angona natokana ho an'ny 2016 hatramin'ny nodian'i Apple tamin'ny taona telo izay nahavitana ny volana Aogositra 24 dia tao amin'ny fahatelo ambony indrindra tamin'ireo fikambanana tao amin'ny lisitra. Ankoatr'izany dia nahazo ny 980,000 ny fametrahana azy hijanona ao am-piasana.
Nifangaro tamin'ny fandoavam-bola taloha i Cook dia nanangona tahirin-drakitra mihoatra ny $ US350 tapitrisa ($ 479 tapitrisa) hatramin'ny nahatongavany ho CEO.
Ankoatr'izany dia afaka manaraka ny antsasaky ny ampahany amin'ny famerenana ny famerenana sy famandrihana vola amin'ny volana Aogositra 2017 sy 2018 raha jerena ny fiverenan'ny tompon-trosa mandritra ny telo taona, araka ny fanazavana nomen'i Bloomberg.
Ny fivarotana 2016 an'ny mpamokatra iPhone amin'ny iPhone dia anisan'izany ny tombom-barotra navoakan'ny 12 ho an'ny antsam-bola tsirairay, mitaky antsasaky ny fikambanana S & P 500.
Ny fanomezana sarobidy ho an'ny VPs seniora Angela Ahrendts, Eddy Cue, Luca Maestri, Dan Riccio sy Bruce Sewell, dia mbola tsy tafiditra tanteraka amin'ny tahirin-kevitry Apple ao anatin'ny telo taona mahery. Ny ambim-baventy hafa ao anatin'ny efa-taona sy tapany taorian'ny nahazoany alalana. Ny valisoa navoakan'ny vola dia nifantoka tamin'ny fifantohana satria ny fikambanana dia tsy nahitam-bokatra sy ny tanjona karama.
Ny fanamarihana avy amin'ny fanambarana amn'ny volan'ny Apple dia ny Chef Design Officer Jony Ive, izay antsoin'ny sasany hoe solontena tena manan-danja ao amin'ny fikambanana. Nosoratan'i Ive be dia be ny zavatra malaza indrindra ao amin'ny Apple, anisan'izany ny iMac, iPod ary iPhone.
Tsy namaly avy hatrany ny antso nataon'ireo mpikirakira Apple sy ny mailaka nalefan'ny ora ivelan'ny orinasa.